ဗိုင်းရပ်စ်မသတ်ခင် သတိပြုရန် အချက်(၁)ချ& — MYSTERY ZILLION
ဗိုင်းရပ်စ်မသတ်ခင် သတိပြုရန် အချက်(၁)ချ&
ကျွန်တော်ပဲ မဖတ်မိတာလား မသိဘူး။
ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ဒီအချက်လေးကို သတိပေးတာ မတွေ့ဘူးသေးလို့ပါ။ တော့ပစ် ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ ဆောရီးပါ။
XP မှာ System Restore ဟာ တဖက်မှာ သုံးစွဲသူကို အဆင်ပြေသလောက် အခြား တဖက်မှကျတော့လည်း ဗိုင်ရပ်စ်ရေးသားသူဟက်ကာတွေရဲ့ အကြိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။
တခါတလေ ဘယ်အန်တီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ သတ်သတ် ဗိုင်းရပ်စ်က မသေနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်သေပါမလဲ။
ဒီကောင်က system restore ထဲမှာ windows ရဲ့ restoer point ဖိုင်တွေနဲ့ ရောပြီး ကျန်နေတာကိုး။
ဒါကြောင့် ဘာအန်တီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပဲ သတ်သတ် သတိလေးချပ်စေချင်တာက
-ဗိုင်းရပ်စ်စကင်န်မလုပ်ခင် system restore ကို ပိတ်ပါ။ အရေးသိပ်မကြီးသော restore point များ ဖြစ်ပါက disc cleanup ဖြင့် အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပါပြီးမှ စကင်န်စလုပ်ပါ။
System Restore ကို ပိတ်ရန်
My Computer --> Right Click --> Properties --> System Restore Tab --> Check the "Turn off System Restore on all drives" box.
System Restore ကို ဖျက်ရန်
၁။ Start --> Programs --> Accessories --> System Tools --> Disc Cleanup
၂။ Disc Cleanup Box ပေါ်လာလျှင် More Options Tab --> System Restore --> Clean Up.
namtustar wrote: »
Thank bro, that is alsoafact we should care before we scan.
ဇူးလူးတို့များ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ရင်းနှီးခင်မင်လာတာ ကြာပေါ့။
ခုမှ မြောက်ပိုင်းကြယ်ကြီး ပြောမှဘဲ သိရတော့တယ်။
Thanksalot " Ko Namtustar ". In ICT field, the most i love is viruses because it's real happiness for me to kill them or to compete with them ( by using various Anti-virus programs ). However, sometime Virus can victorious over me ... .
Your sharing of knowledge is really appreciatable for me. I will utilize it sooner and later.
Alexander ( Unicef, Maw Gyun )
thank so much brother,
we need to know about it.:D:D:6::6: